Sidee Tikniyoolajiyadda Ott-ka ay ula wareegeysaa TV-gaaga | Martech Zone
Sidee Tikniyoolajiyadda OTT ay ula wareegeysaa TV-gaaga
Khamiis, Juun 8, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Jeffrey Hayzlett
Haddii aad waligaa kufsi-u daawatay taxane TV ah oo ku saabsan Hulu ama aad filim ka daawatay Netflix, markaa waad isticmaashay dusha sare nuxurka oo laga yaabo inayan xitaa xaqiiqsan. Caadi ahaan loo yaqaan Ott bulshada baahinta iyo teknolojiyada, waxyaabaha noocan ah waxay hareereeyaan bixiyeyaasha telefishinka telefishinka ee caadiga ah waxayna u adeegsadaan internetka gawaari si ay u sii daayaan waxyaabaha sida dhacdadii ugu dambeysay ee Waxyaabaha shisheeye ama gurigayga, waa Downton Abbey.
Kaliya maahan tikniyoolajiyadda OTT daawadayaasha inay daawadaan bandhigyada iyo filimada dhagsinta badhanka, laakiin sidoo kale waxay siineysaa xorriyadda ay ku sameyn karaan shuruudahooda si qurux badan markasta oo ay rabaan. Kaliya ka fikir arintaas. Imisa jeer oo la soo dhaafay ayay ahayd inaad u foorarsato qorshooyinka maxaa yeelay ma jirin waddo aad ku seegi lahayd dhamaadka xilli-ciyaareedka ee barnaamijka TV-ga ee aad ugu jeceshahay?
Jawaabtu waxay u badan tahay kahor intaan lasoo bandhigin VCRs iyo DVRs - waxa aan isku dayayo inaan iraahdo waa sida aan u isticmaalno warbaahinta inay si aad ah isu badashay. Tikniyoolajiyadda OTT ayaa kala furfurtay xayiraadihii u dhaxeeyay bixiyeyaasha iyo isticmaaleyaasha iyadoo wali macaamiisha u siineysa inay helaan barnaamijyada madadaalada ah ee ay ka filayaan filimka weyn iyo Istuudiyaha TV-ga. Sidoo kale, miyaan sheegay in badanaa ganacsigu xor yahay?
Kahor soo bandhigida nuxurka OTT - tixraaca ugu horreeya ee loo yaqaan eraygan wuxuu ku jiray buugga 2008 Hordhaca Mashiinnada Raadinta Fiidiyowga ee David C. Ribbon iyo Zhu Liu, Caadooyinka TV-yada ee daawadayaasha ayaa inta badan sidii hore ahaa sanadihii la soo dhaafay. Hadal kooban, waxaad iibsatay telefishan, waxaad lacag siisay shirkad xadhig ka samaysa xirmooyinka kanaalada, iyo voila, waxaad leedahay isha madadaalada fiidkii. Si kastaba ha noqotee, arrimuhu si aad ah ayey isu beddeleen maadaama macaamiil badani ay jareen xadhigii iyo dalab kasta oo ay ku soo rogaan shirkadaha fiilooyinka. Sida ku xusan 2017
Marka loo eego 2017 sahan oo ay sameeyeen Leichtman Research Group, Inc., 64% ka mid ah 1,211 qoys ee la daraaseeyay ayaa sheegay inay adeegsadaan adeeg sida Netflix, Amazon Prime, Hulu, ama fiidiyoow dalab ah. Waxay sidoo kale ogaatay in 54% jawaabeyaashu ay sheegeen inay si joogto ah guryahooda ugu galaan Netflix, ku dhowaad labanlaab tirada (28 boqolkiiba) ee dib u sameeyay 2011. Xaqiiqdii, illaa Q1 2017, Netflix wuxuu lahaa 98.75 milyan oo macaamiil ah oo ku baahsan adduunka. (Waa kan qabow shaxda Muujinaya dariiqa ay u marayso xukunka adduunka.)
Inkasta oo OTT ay aragtay koror ballaaran oo caan ka ah qoysaska adduunka oo dhan, hal meel gaar ahaan waxaan ogaaday halka ay dhawaanahan ka heshay xoog wax ku ool ah bulshada dhexdeeda. Sanadkii la soo dhaafay ama wixii la soo dhaafay, waxaan arkay tiro ururo ah oo qaatay teknoolojiyadda OTT si ay u muujiyaan macluumaadkooda ama ay u helaan qof kale ogeysiis daqiiqad ah. Awooddani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay fulinta hawl wadeennada u baahan macluumaadka ugu dambeeya iyada oo aan loo eegin meesha ay ku sugnaan karaan waqtigaas.
Hal tusaale oo muhiim ah ayaa ah C-Suite TV, oo ka baxa barnaamijkeyga TV-ga C-Suite oo uu weheliyo Jeffrey Hayzlett. Horaantii sanadkan, kanaalka ganacsiga ee baahida loo qabo ayaa sameeyay iskaashi lala yeesho GaaritaankaMeTV, "shabakad madadaalo oo iskuxidh badan iyo madal qaybinta caalamiga ah," si aan barnaamijyadayda uga sii daayo telefishannada 50-ka madaar ee ugu waaweyn Maraykanka iyo in ka badan 1 milyan oo hudheelo ah oo ku baahsan waddanka. Waa wax lagu farxo in la arko barnaamijkeyga oo aragti dheeraad ah hela, gaar ahaan bartilmaameedka aan rabo inaan gaaro.
Aniga aragtidayda, garoomada diyaaradaha iyo huteeladu waa si aan shaki lahayn qaar ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu soo jiito dareenka kala qaybsanaanta ganacsatada safarka ah kuwaas oo inta badan ogaada in waqtigooda kaliya ee maalinta la joogo ay tahay inta ay sugayaan diyaarad ama ay ku nasanayaan hoteelka hoteelka (ka qaad qof yaa si fiican u garanaya tan oo dhan).
Kahor, haddii qof ganacsade ah oo ganacsade ah uu doonayo inuu daawado mid ka mid ah bandhigyada ganacsiga, isaga ama iyadu waa inay ku sameeyaan "qaabkii hore" ee loogu fiirsaday waqti cayiman. Laakiin hordhaca tiknoolajiyada 'OTT', waxay ku heli karaan barnaamijyo ka hadlaya danahooda waqtigooda.
Waxaan aad u hubaa in tikniyoolajiyadda OTT ay sii wadi doonto oo keliya inay u koraan mustaqbalka fog maaddaama aan noqonay bulsho ka sii hormarsan dijitaal ahaan. Kobacaani wuxuu u sahlayaa ganacsiyada iyo macaamiisha inay si isku mid ah isugu xirmaan heer caalami ah iyada oo aan la helin caqabadaha na soo gaadhsiiyey bixiyeyaasha fiilooyinka muddo aad u dheer. Maaddaama baahida loo qabo helitaanka deg-degga ah ee madadaalada iyo barnaamijyada waxbarashadu ay sii kordhayaan, waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko inta teknolojiyadda OTT ay naga qaadi doonto. Garan maayo adiga, laakiin waan la soconayaa si aan u ogaado.
Tags: amazon primeC-Suite TVC-Suite oo uu weheliyo Jeffrey Hayzletthulukooxda cilmi baarista leichtmannetflixOctoberdusha sareGaaritaankaMeTVfiidiyowga dalabka
Jeffrey Hayzlett waa telefishan caan ah iyo raadiyaha C-Suite oo uu weheliyo Jeffrey Hayzlett iyo Aragtida Fulinta TV-ga C-Suite iyo Dhamaan Ganacsiga oo leh Jeffrey Hayzlett ka baxa Idaacadda C-Suite. Hayzlett waa caan caan ku ah ganacsiga adduunka, ku hadla, qoraa ugu iibinta badan, iyo Guddoomiyaha Shabakadda C-Suite, oo ah hoyga shabakadda ugu awoodda badan adduunka ee hoggaamiyeyaasha C-Suite. Ku xidhnow Hayzlett on Twitter, Facebook, LinkedIn, ama Google+.
TurnTo: Dib-u-eegis Ku samee Qaybiyeyaasha Badeecadaada